Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo maanta booqanaya Xeryaha Dhadhaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo maanta booqanaya Xeryaha Dhadhaab
Mareeg.com: Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa maanta booqanaya xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya, kuwaasoo ay ku noolyihiin kumanaan qaxtooti Soomaaliyeed.
Ban Ki Moon ayaa u kuurgelaya xaaladda nololeed iyo amaan ee xeryahaas oo dowladda Kenya ku hamisay iney xrito, iyadoo qaar ka mid ah qaxootiga ku eedeysay iney qeyb ka yihiin amaan xumada ka dhacda Kenya.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inuu kala hadlo dowladda Kenya xaaladaha qaxootiga iyo sidii ay usii joogi lahaayeen deegaanadooda.
Booqashada Ban Ki Moon ayaa kusoo beegmeysa xilli waxyaabaha asaaska ah nolosha ay gabaabsi ku yihiin xeryaha Dhadhaab oo ay ku nooloyihiin ilaa Nus Malyuun qof.
Robbie Williams Entertains Wife During Labour
Ciidamada Soomaaliya iyo AMISOM oo qorsheynaya iney u dhaqaaqaan Ceeldheer iyo Galhareeri